Haasawa Hayyu Dureen ABO ONN irratti taasisan keessaa haga tokko: | Kichuu
Posted on February 20, 2021 by kichuu_admin
● ONN: Sochii Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisee haalli dhaabichi keessa jiru maal fakkaata?
HD ABO: “Biyya kana keessatti jijjiiramni argamuuf tattaafatamee biyyatti galle. Jijjiiramichi nagaa, dimokiraasiifi wal qixxummaa kan hawwate ture. Garuu jijjiiramni homaatuu utuu hin jiraatiin caasaafi miseensa ABO bira darbee biyyattiiyyu rakkoo seensisee hidhaafi ajjeechaa keessa socho’aa jirra. Waajjiraalee banannee sochii nagaa taasisuuf yaallus akkuma bara 1992 waajjira cufuufi saamuun itti fufe.
Kun qaamuma qabsoo ta’ee jira. Waggoota lamaaf akkasitti deemee ajjeefamuu Haacaaluu boodas rakkoon biraa nu mudate. Rakkoon nu mudate jennee haga ammaatti qabsoo karaa nagaa hin dhiifne. Hidhaafi waajjiraaleen keenya cufachuu ilaalchisuun tarrisa waajjira cufameefi namoota hidhamanii qaamota dhimmi ilaalu beeksifnee deebii sirnaa hin arganne.
Filannoo keessaa qooda fidhachuuf murteeffannee seennee rakkoo mootummaan uumaa jiru utuu iyyannuu boordiin filannoos gurra cufatee qophii filannoo itti fufe. Waajjira keenya muummicha dabalatee cufamee yeroo jirutti waan filannoo dubbatu. Boordiin filannoo rakkoo nuti ibsinu dhiisee rakkoo mootummaan ofumaa uume ‘rakkoo keessoo dhaabaa’ kan jedhu qabatee irra ciisaa ba’ee sana akka sababaatti dhiyeesa. Rakkoo sana kan uume mootummaadha. Sana ragaa itti qabna. Yoo rakkoon nu gidduu jiraateyyu akki itti furannu seeraafi caasaatu jira. Kana hundayyu Addi Bilisummaa Oromoo qophii filannoo akka hin goone danqaraa guddaa karaa ittiin uumanidha. Kunuu ta’ee utuu hogganaafi miseensi keenya mana hidhaa jiru nuti filannoo kana keessatti hirmaachuuf dhiibbataa turre.
● ONN: Rakkoolee kana hundaaf komiifi iyyata dhiyeessitaniif deebiin kenname maal fakkaata?
● ONN: Biyya kana keessa lola walirraa hin cinneti geggeeffamaa as ga’e. Maddi lola kanaa maali?
● ONN: Sirni Federaalizimii akka hin barbachifneefi akka badu kan fedhan paartileen siyaasaa ni jiru. Dhimma waliin jireenya sabootaafi Federaalizimii kana irratti maal jettu?
● ONN: Qeeqaafi komiin dhiyeenya kana taajjabdootaafi raawwachiistota filannoo ilaalchisuun gara boordii filannootti galchitan maal hammatee jira?
● ONN: Haalli bara chaarteraa (1992) fi haalli ammaa maaliin wal fakkaata? Maaltummoo adda godha?
● ONN: Addi Bilisummaa Oromoo filannoo keessaa ni ba’aa?
● ONN: Haala kana gidduutti haalli sochii siyaasaa yoo baname, hidhamtoonni hiikamamii waajjirri yoo baname filannootti ni hirmaattuu? Yeroon boordiin filannoo kaa’e isin ga’aa?
● ONN: Karaa tokko Mootummaa Ce’umsaa jechaa karaa tokkommoo waan filannoo kana deemsisuun akkamitti danda’ama?
● ONN: Hariiroon ABO fi KFO maal fakkaata?
● ONN: Yaada hafe yoo qabaattan…